Sidee ayey Heyadaha caalamka u beddeleen habka aan ka wada hadalno COVID 19? – Benaadirtv.com
Ma xasuusataa in dadka lagu qasbay inay guryahooda joogaan oo heyadaha caafidmaadka yidhi waa sida keliya ee looga hortagi karo fayraskan corona ee musiibada eheyd? Taasi waxay ahayd oo ah inaan sameysanno, iyadoo aan loo eegin inta ay waxyeello u geysatay habnololeedka iyo amniga malaayiin dad ah oo aan tira lahayn ee caalamka?
Su’aasha ugu dambaysa – ma ogtahay tirada dadka ku nool Boqortooyada Midowday Ingriiska ee sida rasmiga ah ugu dhinta coronavirus shalay? Wa 0.
Waxaa laga yaabaa inaadan maqlin taas, sababta oo ah mararka qaarkood shantii toddobaad ee la soo dhaafay ama sidaa darteed warbaahinta ayaa gebi ahaanba joojisay adeegsiga ereyga “dhimashada”, waxayna bilaabeen inay ka hadlaan kaliya “kiisas”.
Kiis waa qof kasta oo tijaabo togan ku sameeya Sars-Cov-2, adoo adeegsanaya tijaabooyinka PCR-ga ee aan la isku halleyn karin ee soo saarta tiro aad u badan oo been abuur ah.
Xitaa hadii aad u malayso in baaritaanka togan uu dhab yahay, inta badan “kiisaska” waa asymptomatic. Inta u dhaxaysa xaqiiqada beenta ah, tijaabooyinka aan lagu kalsoonaan karin iyo caabuqa asymptomatic, kiis loo yaqaan ‘sars-cov-2’ waa mid aan macno lahayn.
Aynu sheegno inay jiraan astaamo IYO baaritaan fiican, oo aan u maleyno inaysan ahayn been ah oo yahay hargab keliye, Hagaag, xitaa inta ugu badan “kiisaska badankoda” ayaa si yar u jirran doonan. Xaqiiqdii lixda milyan ee kiisaska firfircoon ee adduunka, keliya 1% ayaa loo arkaa inay aad u jiran yihiin. Intooda badani way badbaadi doonaan.
Hadaan si daacadnimo ah uhadlo, dadka aduunka intiisa badan lagu arkay covid19, badankoda way caafimaad qabaan.
Laakiin arrimuhu sidii caadiga ahayd uguma noqon nolosha caalamka. Xaqiiqdii, way ka sii darayaan. Dowladaha ayaa cagta soo mariyay albaabka guriyada shacabka, mana damacsan inay dhaqaaqaan.
Maaskaro (Masks) hada waa ku qasab UK, iyo Australia, iyo New Zealand, iyo Jarmalka iyo Faransiiska. Iyo qaar kaloo badan. Musharaxa xisbiga dimoqraadiga ee madaxweyne, Joe Biden, ayaa sheegay inay waajib ku tahay Maraykanka sidoo kale.
Waxa jira “xidhitaan maxalli ah” oo ka jira Birmingham ee Ingriiska, sababta oo ah “kiisaska oo si lama filaan ah u kordha”, laakiin wax faahfaahin ah kama hayno tirooyinka ay yihiin, ama haddii taasi ay u tarjumayso nooc kasta oo cudur ah, iska daa dhimashada COVID19.
New Zealand waxaa ku dhacay 1600 kiis 5 bilood gudahood. Ma aysan soo sheegin wax dhimasho ah ilaa bishii Maajo. Laakiin waddankoodu waa mid xanniban dimuqraadiyadiina iyo dhaq dhaaqa waa la joojiyay.
Oh, waxanu ilowbay. waxay u dirayaan tijaabooyin togan shacabka ku nool dalkaas (iyo qoysaskoodaba) “xarumo karantiil”, halkaas oo haddii aad diido in lagu baaro, si joogto ah ayaa lagugu hayn doonaa oo la mid ah xarig.
Australia waxay xireysaa magaalooyinka oo dhan, xitaa waxay soo rogaysaa bandoow, oo ku saleysan 450 dhimasho, iyada oo ee degan yahin ku dhawaad 25milyan.
Meel walbana luqadda ayaa is beddeleysa. Marki hore, axey luuqada ku saabsanaayd la dagaallanka Covid19, laakiin hadda waxay ku saabsan tahay “covid19 iyo masiibooyinka mustaqbalka”, ama “caqabadaha kale ee waa weyn ee wajahaya aadanaha” … kuwaas oo macnaheedu yahay macno ahaan wax alla waxay rabaan inay la micno yihiin.
Waxaas oo dhan waxay ku saleysan yihiin kiisaska sii kordhaya iyada oo aan la tixraacin xaqiiqada oo ah dhimashadu oo hoos udhacayso.
Drs Muna Haji Deriye, MD – Bristol, England
(Benaadir TV Health and Social Issues Contributor)
23rd Aug 2020 23rd Aug 2020 Editor
Previous Previous post: Uganda to send 600 troops including militia’s to Somalia
Next Next post: Somalia’s Sporting talent gaining acknowledgement it deserves as young runner wins 5,000m race